ဂြူဗီနဲ့ အဆငျမပွတေော့တဲ့ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒို ဘာလဲ၊ ဘယျလဲ? – Sports A2Z
Analysis • Article • Bundesliga • La Liga • Ligue1 • Premier League • Serie A • Transfer News
ဂြူဗီနဲ့ အဆငျမပွတေော့တဲ့ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒို ဘာလဲ၊ ဘယျလဲ?
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့အတူ ဂိုးတှေ သှငျးယူထားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ခွစှေမျးကတော့ တခြို့ပှဲတှမှော အရငျလို မဟုတျဘဲ လြော့ကနြခေဲ့တဲ့ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပုံစံဟာ အရငျလို မဟုတျတော့ဘူးလို့ ဝဖေနျမှုတှေ ရှိနခေဲ့ပွီး ဒါကို နောကျဆုံး ရှုံးနိမျ့ထားခဲ့တဲ့ ဘီနီဗနျတိုနဲ့ ပှဲစဉျက ပွောစရာတဈခုအဖွဈ သကျသဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ။
အိမျကှငျးမှာ တနျးတကျအသငျးငယျလေးရဲ့ တဈလုံးတညျးသော သှငျးဂိုးကို မခပြေနိုငျခဲ့တဲ့ ရျောနယျလျဒို၊ မိုရာတာ၊ ခီယဆော၊ ဘာနာဒကျဈခီ၊ ကူလူဆကျဗျစကီးတို့လို တိုကျစဈကစားသမားတှရေဲ့ နာမညျဂုဏျသတငျးက ညှိုးမှိနျခဲ့ရသလို နညျးပွ အနျဒရီယာ ပီယာလိုရဲ့ အရညျအသှေးကလညျး မေးခှနျးထုတျစရာဖွဈခဲ့ပမေယျ့ လူတှကေ ပျေါတူဂီသားကွီးကိုပဲ ပိုပွီး ပဈမှတျထားခဲ့ကွတာပါ။
အသကျ ၃၆ နှဈအရှယျဆိုတာ တခွားတိုကျစဈမှူးတှဆေိုရငျ ဘောလုံးလောကက အနားယူတတျတဲ့ အရှယျဖွဈပမေယျ့ ရျောနယျလျဒိုကတော့ ရှားပါးတဲ့ အစုအဖှဲ့ထဲမှာ ပါဝငျနပွေီး တဈရာသီကို သှငျးဂိုး ၂၀ အောကျမကအြောငျ ထိနျးသိမျးထားနိုငျဆဲဖွဈသလို ဒီရာသီ စီးရီးအမှောလညျး ၂၃ ဂိုး သှငျးယူထားခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျတှကေတော့ G.O.A.T – Greatest of All Time လို့ ချေါတဲ့ ကစားသမားတှဆေီက ပိုမိုမြှျောလငျ့လရှေိ့ပွီး လီယှနျနယျ မကျဆီဟာ သူ့ကို ခဈြကွတဲ့ ငယျဘဝကတညျးက ကစားလာခဲ့တဲ့ အသငျးပရိသတျတှကွေားမှာ ပွဿနာ မရှိပမေယျ့ ရျောနယျလျဒိုကတော့ အသကျကွီးမှာ ရောကျလာခဲ့တဲ့ အသငျးမှာ တူရငျသားပရိသတျတှဆေီက ပိုမိုတောငျးဆိုခံနရေတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဟောလီးဝုဒျ ရုပျရှငျကားတှထေဲမှာတော့ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးဟာ Don you wantapiece of me? လို့ ပွနျလှနျပေါကျကှဲရမယျ့ အခွအေနေ ဖွဈပမေယျ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ထုတျပွောမထားတဲ့ စညျးမဉျြးတှအေရ ပရိသတျကို ပွနျငွိုငွငျလို့ မဖွဈသလို ပါးနပျဖို့လညျး လိုနတောကွောငျ့သာ Ballon d’Or ဘယျလှနျဒေါ ၅ ဆုရှငျရဲ့ ဒေါသကို မမွငျရတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဘယျနောကျခံလူ မပါဘဲ ဗဟိုခံစဈမှူးနှဈယောကျနဲ့ ညာနောကျလူတဈယောကျကိုပဲ သုံးခဲ့တဲ့ နညျးပွ ပီယာလို၊ လိုအပျနဆေဲ တိုကျစဈမှူး မိုရာတာ၊ ဘာစီလိုနာကနေ ဂငျြးမိခဲ့ပွီး ရှုံးစမေယျ့ ဂိုးကို တာဝနျရှိခဲ့တဲ့ အာသာ၊ ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ ကနျခကျြတှကေို ကာကှယျရလို့ တဈဖကျဂိုးသမား လဲကနြခြေိနျမှာတောငျ ငှကျပဈတဲ့ အသငျးဖျောတှနေဲ့ ဂြူဗငျတပျဈဟာ လကျရှိမှာတော့ စီးရီးအခေနျြပီယံဆုအတှကျ အငျတာမီလနျအသငျးနဲ့ ၁၀ မှတျတောငျ ကှာဟသှားခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဖွဈသမြှအကွောငျး အဆိုးခညျြးပဲ ဖွဈနခြေိနျမှာ ၂၃ ဂိုးကိုတောငျ မမွငျနိုငျတော့တဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့ ဝဖေနျသူတှကေိုတော့ ရျောနယျလျဒိုအနနေဲ့ စိတျပကျြနမှော အသအေခြာပဲဖွဈပွီး လာမယျ့ရာသီကုနျမှာတော့ ဂြူဗငျတပျဈဘကျကလညျး ယူရို ၂၅ သနျး ရရငျတောငျ လကျလှတျနိုငျတယျလို့ လသေံပဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါက လကျရှိအခြိနျအထိ ဆူပါလူသားတဈဦးဖွဈကွောငျး သကျသပွေနဆေဲဖွဈတဲ့ ပျေါတူဂီသားကွီးရဲ့ မာနကို ထိခိုကျစမှောလညျးဖွဈပွီး သတငျးတှအေရတော့ သူ့ကို ပီအကျဈဂြီ၊ အငျတာမိုငျယာမီ၊ ရီးရဲလျမကျဒရဈ၊ ဘိုငျယနျမွူးနဈနဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးတှကေ စောငျ့ကွညျ့နရေကွတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
ဘိုငျယနျမှာတော့ သူနဲ့ လီဗနျဒေါ့ဗျစကီးတို့ အရေးပါမှုကို ခှဲဝယေူရမှာဖွဈတာကွောငျ့ သိပျပွီး မဖွဈနိုငျသလို ပီအကျဈဂြီမှာလညျး နမော၊ အမျဘာပတေို့နဲ့ ပုံရိပျရော ခွစှေမျးခငျြးပါ ပွိုငျရဦးမှာဖွဈတာကွောငျ့ သူ့အတှကျ ရှေးခယျြဖို့ နှဈခါထကျမနညျး ပွနျလညျစဉျးစားရနိုငျပွီး အမွငျဆုံးအဆငျ့မှာ အသုံးတျောခံနိုငျဆဲဖွဈသူ G.O.A.T တဈဦးအနနေဲ့ အငျတာမိုငျယာမီနဲ့ MLS ကိုတော့ ခွခေဖြို့ မရှိနိုငျတာပါ။
ဒီအထဲမှာ အသငျးဟောငျးတှဖွေဈကွတဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈနဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတို့ကသာ လိုအပျခကျြတှအေတှကျ တံခါးဖှငျ့ကွိုဆိုဖို့ ရှိနိုငျသလို သူ့ကိုလညျး ပစားပေးမယျ့ အနအေထားမှာရှိတာကွောငျ့ အနီးစပျဆုံးအသငျးတှအေဖွဈ ထငျမွငျယူဆမိပွီး ဇီနီဒနျး ဇီဒနျးနဲ့ ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျတို့လို ဒီနှဈသငျးရဲ့ Decision Maker တှအေနနေဲ့ ဘယျလိုတှေးမယျဆိုတာကိုပဲ စိတျဝငျစားစရာဖွဈနပေါတယျ။
သခြောတာကတော့ အကောငျးဆုံးအဆငျ့မှာ မကျဆီနဲ့ နှဈဦးတညျးသာ ပွိုငျစရာရှိတဲ့ ဒီကစားသမားကွီးဟာ ကြေးဇူးမတငျတတျတဲ့ တူရငျနဲ့ အီတလီမွကေနေ ထှကျခှာတော့မှာပဲဖွဈပွီး လာမယျ့နှရောသီမှာ ဘယျအသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွပွီး ဂိုးတှေ သှငျးပေးဦးမလဲဆိုတာပဲ စဉျးစားရဖို့နဲ့ ဘာတှဖွေဈလာမလဲ၊ ဘယျကိုသှားမလဲဆိုတာပဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈကွောငျး သုံးသပျဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ZAWGYI: ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့အတူ ဂိုးတွေ သွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ခြေစွမ်းကတော့ တချို့ပွဲတွေမှာ အရင်လို မဟုတ်ဘဲ လျော့ကျနေခဲ့တဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပုံစံဟာ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေခဲ့ပြီး ဒါကို နောက်ဆုံး ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တဲ့ ဘီနီဗန်တိုနဲ့ ပွဲစဉ်က ပြောစရာတစ်ခုအဖြစ် သက်သေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ကွင်းမှာ တန်းတက်အသင်းငယ်လေးရဲ့ တစ်လုံးတည်းသော သွင်းဂိုးကို မချေပနိုင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို၊ မိုရာတာ၊ ခီယေဆာ၊ ဘာနာဒက်စ်ခီ၊ ကူလူဆက်ဗ်စကီးတို့လို တိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ့ နာမည်ဂုဏ်သတင်းက ညှိုးမှိန်ခဲ့ရသလို နည်းပြ အန်ဒရီယာ ပီယာလိုရဲ့ အရည်အသွေးကလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် လူတွေက ပေါ်တူဂီသားကြီးကိုပဲ ပိုပြီး ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာပါ။
အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ်ဆိုတာ တခြားတိုက်စစ်မှူးတွေဆိုရင် ဘောလုံးလောကက အနားယူတတ်တဲ့ အရွယ်ဖြစ်ပေမယ့် ရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ ရှားပါးတဲ့ အစုအဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်နေပြီး တစ်ရာသီကို သွင်းဂိုး ၂၀ အောက်မကျအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်သလို ဒီရာသီ စီးရီးအေမှာလည်း ၂၃ ဂိုး သွင်းယူထားခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ G.O.A.T – Greatest of All Time လို့ ခေါ်တဲ့ ကစားသမားတွေဆီက ပိုမိုမျှော်လင့်လေ့ရှိပြီး လီယွန်နယ် မက်ဆီဟာ သူ့ကို ချစ်ကြတဲ့ ငယ်ဘဝကတည်းက ကစားလာခဲ့တဲ့ အသင်းပရိသတ်တွေကြားမှာ ပြဿနာ မရှိပေမယ့် ရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ အသက်ကြီးမှာ ရောက်လာခဲ့တဲ့ အသင်းမှာ တူရင်သားပရိသတ်တွေဆီက ပိုမိုတောင်းဆိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာတော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာ Don you wantapiece of me? လို့ ပြန်လှန်ပေါက်ကွဲရမယ့် အခြေအနေဖြစ်ပေမယ့် ဘောလုံးလောကရဲ့ ထုတ်ပြောမထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရ ပရိသတ်ကို ပြန်ငြိုငြင်လို့ မဖြစ်သလို ပါးနပ်ဖို့လည်း လိုနေတာကြောင့်သာ Ballon d’Or ဘယ်လွန်ဒေါ ၅ ဆုရှင်ရဲ့ ဒေါသကို မမြင်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နောက်ခံလူ မပါဘဲ ဗဟိုခံစစ်မှူးနှစ်ယောက်နဲ့ ညာနောက်လူတစ်ယောက်ကိုပဲ သုံးခဲ့တဲ့ နည်းပြ ပီယာလို၊ လိုအပ်နေဆဲ တိုက်စစ်မှူး မိုရာတာ၊ ဘာစီလိုနာကနေ ဂျင်းမိခဲ့ပြီး ရှုံးစေမယ့် ဂိုးကို တာဝန်ရှိခဲ့တဲ့ အာသာ၊ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ကန်ချက်တွေကို ကာကွယ်ရလို့ တစ်ဖက်ဂိုးသမား လဲကျနေချိန်မှာတောင် ငှက်ပစ်တဲ့ အသင်းဖော်တွေနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်ဟာ လက်ရှိမှာတော့ စီးရီးအေချန်ပီယံဆုအတွက် အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ ၁၀ မှတ်တောင် ကွာဟသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်သမျှအကြောင်း အဆိုးချည်းပဲ ဖြစ်နေချိန်မှာ ၂၃ ဂိုးကိုတောင် မမြင်နိုင်တော့တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ဝေဖန်သူတွေကိုတော့ ရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ စိတ်ပျက်နေမှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပြီး လာမယ့်ရာသီကုန်မှာတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်ဘက်ကလည်း ယူရို ၂၅ သန်း ရရင်တောင် လက်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ လေသံပစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါက လက်ရှိအချိန်အထိ ဆူပါလူသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေဆဲဖြစ်တဲ့ ပေါ်တူဂီသားကြီးရဲ့ မာနကို ထိခိုက်စေမှာလည်းဖြစ်ပြီး သတင်းတွေအရတော့ သူ့ကို ပီအက်စ်ဂျီ၊ အင်တာမိုင်ယာမီ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေက စောင့်ကြည့်နေရကြတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဘိုင်ယန်မှာတော့ သူနဲ့ လီဗန်ဒေါ့ဗ်စကီးတို့ အရေးပါမှုကို ခွဲဝေယူရမှာဖြစ်တာကြောင့် သိပ်ပြီး မဖြစ်နိုင်သလို ပီအက်စ်ဂျီမှာလည်း နေမာ၊ အမ်ဘာပေတို့နဲ့ ပုံရိပ်ရော ခြေစွမ်းချင်းပါ ပြိုင်ရဦးမှာဖြစ်တာကြောင့် သူ့အတွက် ရွေးချယ်ဖို့ နှစ်ခါထက်မနည်း ပြန်လည်စဉ်းစားရနိုင်ပြီး အမြင်ဆုံးအဆင့်မှာ အသုံးတော်ခံနိုင်ဆဲဖြစ်သူ G.O.A.T တစ်ဦးအနေနဲ့ အင်တာမိုင်ယာမီနဲ့ MLS ကိုတော့ ခြေချဖို့ မရှိနိုင်တာပါ။
ဒီအထဲမှာ အသင်းဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ကသာ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် တံခါးဖွင့်ကြိုဆိုဖို့ ရှိနိုင်သလို သူ့ကိုလည်း ပစားပေးမယ့် အနေအထားမှာရှိတာကြောင့် အနီးစပ်ဆုံးအသင်းတွေအဖြစ် ထင်မြင်ယူဆမိပြီး ဇီနီဒန်း ဇီဒန်းနဲ့ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်တို့လို ဒီနှစ်သင်းရဲ့ Decision Maker တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုတွေးမယ်ဆိုတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတယ်။
သေချာတာကတော့ အကောင်းဆုံးအဆင့်မှာ မက်ဆီနဲ့ နှစ်ဦးတည်းသာ ပြိုင်စရာရှိတဲ့ ဒီကစားသမားကြီးဟာ ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့ တူရင်နဲ့ အီတလီမြေကနေ ထွက်ခွာတော့မှာပဲဖြစ်ပြီး လာမယ့်နွေရာသီမှာ ဘယ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြပြီး ဂိုးတွေ သွင်းပေးဦးမလဲဆိုတာပဲ စဉ်းစားရဖို့နဲ့ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ၊ ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
26 Mar နံနကျခငျး နောကျဆုံးရ အာဆငျနယျသတငျးမြား စုစညျးမှု
ဝကျဈဟမျးနဲ့ ခွစှေမျးကွောငျ့ အျောဒီဂှါဒျကို အိုဇေးလျနရော အစားထိုးနိုငျဖို့ရှိလာတဲ့ အာဆငျနယျ